အအေးမိခြင်းနှင့် တုပ်ကွေးမိခြင်းကို တိုက်ထုတ်ပေးမယ့် အကောင်းဆုံးအစားအစာ ၆ မျိုး - Hello Sayarwon
သင်လည်ချောင်းယားနေသည် သို့မဟုတ် သင်နှာရည်ယိုနေသည် ခံစားနေရသောအခါ အဖျားမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှုအရမ်းနည်းနေပါသလား။ နိုးပါ။ သင့်ခုခံအားစနစ်ကိုများစေသော အစားငါးမျိုးကိုဖော်ပြလိုပါသည်။
လေ့လာချက်များအရ ကြက်သားစွပ်ပြုတ်က ယောင်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြက်ထဲတွင်ပါသော စစ်စတင်း အမိုင်နိုအက်စစ် ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာက နှာခေါင်း ရင်ဘတ် လည်ချောင်း ယောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့်အချွဲကိုပါးစေသည်။ ခေါက်ဆွဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်ခြင်းက စွပ်ပြုတ်ရှိ အနာကျက်စွမ်းအားကိုပိုမြန်စေပြီး သင့်အင်အားကိုပိုများစေသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က အာဟာရပမာဏကိုမြင့်စေပြီး ခုခံအားစနစ်ကိုပိုးကောင်းစေသည်။
ကြက်သွန်က သင့်အရသာခံမှုကိုမြင့်စေသည်။ ဓါတ်တိုးပစ္စည်းဆန့်ကျင်သော အရာက ဗိုင်းရပ်ကိုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အဖျားကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သောအချိန်ကိုတိုစေသည်။ အဆီပါသောကွန်ပေါင်း အလီစင်ကလဲ အဖျားတိုက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ကြက်သွန်ကို သဘာဝအတိုင်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြည့်စွက်စာများဥပမာ ပေါင်ဒါ အဆီများက လည်းအနာသက်သာနှုန်းကိုပိုများစေသည်။ နေ့တိုင်းရှူးရှူးမူးမူးစားရန်တော့မလိုပါ။ တစ်ရက် တခါနှစ်ခါက ဆရာဝန်ကိုမလိုသည်ထိကျန်းမာနိုင်သည်။
သင်လည်ချောင်းနာနေပါက သင်အဖွားက ပျားရည်တိုက်တာကိုသင်မှတ်မိနိုင်သည်။ လေ့လာချက်များအရ ပျားရည်က လည်ချောင်းကိုကာပေးခြင်း ယားခြင်းကိုသက်သာစေခြင်းဖြင့် ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ တကယ်ဆို ပျားရည်က အချို့သောဆေးများထက်ပိုထိရောက်နိုင်သည်။ အပင်ပျားရည်က ဆေးဝါးအရည်အသွေးများစွာရှိသည်။၁၂လအောက်ကလေးများကိုပျားရည်မတိုက်သင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင်ဆိုသော မွေးကင်းစအစာအဆိပ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တရုတ်က နှစ်ပေါင်းများစွာအနာကျက်မြန်စေသောဂုဏ်ကကြာရှည်စွာရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါ လက်ဖက်ရည်တွင် ဓါတ်တိုးခြင်းဆန့်ကျင်သည့်အရာပါသည်ဟုသက်သေပြပြီးဖြစ်ပြီး ခုခံအားစနစ်ကိုမြန်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိမ်းရောင် အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်နှစ်ခုလုံးတွင် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သောပစ္စည်းများပါဝင်ပြီး ခုခံအားတက်စေသော အယ် သီနင်းပါဝင်သည်။ ကားဒစ်တက္ကသိုလ်မှလေ့လာသူများက အပူသောက်စရာများက နှာချေခြင်း လည်ချောင်းနာခြင်း နှုန်းခြင်းစသည်တို့ကိုသက်သာစေကြောင်းတွေ့ရှိထားသည်။ လက်ဖက်ရည်တွင် ကဖီးဓါတ်ပါသည်ကိုတော့မမေ့ပါနှင့်။ သင်ကလေးအားတိုက်လိုပါက လက်ဖက်ရည် ဆေးတိုက်နိုင်သည်-လက်ဖက်ရည်တစ်နေ့တစ်ခွက်သည် ကောင်းကျိုးများစွာရနိုင်သည်။
အသီးအရွက်ကိုဆောင်းရာသီတောက်လျောက်စားရန်ပျင်းပါက ဖျော်ရည်ကိုပြောင်းသောက်နိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက ဗီတာမင်ပမာဏများစွာစားခြင်းက အဖျားလက္ခဏာအပေါ်ထိရောက်မှုရှိမရှိကိုလက်မခံနိုင်သေးပါ။ အချို့လေ့လာချက်များက ဗီတာမင်စီသည် အဖျားစဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ဗီတာမင်စီဖြည့်စွက်စာအစား ဗီတာမင်များသောအသားများ းဥပမာ စတော်ဘယ်ရီ လိမော် ခရမ်းချဉ်သီး ပန်းမုန်လာတို့ကိုပေးလိမ့်မည်။
အသားသီးသန့်က အဖျားအတွက် ကျန်းမာစေသောအစာဖြစ်သည်။ သံဓါတ်များစွာပါပြီး ခုခံအားစနစ်ကိုသန်မာစေသည်။ သံဓါတ်တက်စေသော ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓါကိုယ်မှစုပ်ယူလွယ်သောသံဓါတ်ကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ပေးရုံမျှမက ဇင့် နှင့် အခြားရောဂါတိုက်ပေးသော သတ္ထုများစွာပါဝင်သည်။ ထိုကြောင်သင်အနည်းငယ်နှာမွန်နေပါက အသားသီးသန့်စားခြင်း ငါးစာခြင်းတို့ကသက်သာစေနိုင်သည်။
6 best cold and flu fighting foods.http://www.kidspot.com.au/health/galleries/health-galleries/6-best-cold-and-flu-fighting-foods. Accessed August 29, 2016.
10 Foods to Eat When You Have the Flu.http://www.webmd.com/cold-and-flu/home-remedies-9/slideshow-flu-foods. Accessed August 29, 2016.
Exactly What To Eat When You Have A Cold Or Flu.http://www.prevention.com/health/health-concerns/what-eat-when-sick.Accessed August 29, 2016